पर्यटकले दैनिक कति खर्च गर्छन् ? -
पर्यटकले दैनिक कति खर्च गर्छन् ?
२७ असार २०७५, बुधबार ०८:२९ 311 पटक हेरिएको
पोखरा । नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले दैनिक खर्च कति गर्छन् रु पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले शनिबार पेस गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विदेशीको दैनिक खर्च औसतमा ५३ अमेरिकी डलर मात्र छ । थापाको भनाइमा यो खर्च निकै कम हो।
त्यसो भए पर्यटकको खर्च बढाउने उपाय के छन् रु थापा भन्छन्, ‘पर्यटक रमाउने आकर्षक गतिविधि गर्नुपर्यो । अनि सस्तोमा सेवा दिनु भएन । महँगा पूर्वाधार विकास गर्न हिच्किचाउनु भएन । नेपालका पर्यटकीय प्रडक्टलाई पर्यटन व्यवसायीले उच्च मूल्यमा बेच्न नसक्दा पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ नपाएको थापाको भनाइ छ।पोखरामात्र नभई आसपासका क्षेत्रमा गतिविधि बढाउँदै पूर्वाधार थप्दै जाने हो भने पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँ पाउने उनले बताए । वल्र्ड ट्राभल एन्ड टुरिजम काउन्सिलको सन् २०१७ को प्रतिवेदनले पनि नेपाल आएका पर्यटकको दैनिक खर्च ५३ डलर रहेको देखाएको छ ।
पर्यटकलाई गरिने व्यवहार, अप्ठेरो परेको बेला गरिने उद्धारमा पनि पर्यटन निर्भर रहने उनले बताए । त्यसबाहेक पर्यटक आगमन बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन केन्द्र बनाउनुपर्ने पनि थापाले बताए । ‘मिटिङ, इन्सेन्टिभ, कन्फेरेन्स र एक्जिविसन ९माइस० टुरिजममा पनि नेपालमा सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि ठूला र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सम्मेलन केन्द्र चाहिन्छ,’ उनले भने । थापाले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन होमस्टेमा गुणस्तर बढाउनुपर्ने सुझाए।
पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपालमा पर्यटकको बसाइ अवधि कम हुनुमा सडक र काठमाडौंको प्रदूषण रहेको बताए । ‘विमानस्थलमा ओर्लिएपछि पट्यारलाग्दो सडक यात्रा र प्रदूषणको मारमा पर्यटक पर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सडक त सुधार गर्नैपर्छ ।’ सरकारले सन् २०२० मा राखेको २० लाख पर्यटकको लक्ष्य पूरा गर्न हालै भारतसँग भएको हवाई रुट खुलाको सम्झौता, नेपालमा बनिरहेका पूर्वाधार र भारत तथा चीनमा हुने प्रवद्र्धन सहयोगी रहेको उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट